Mogadishu Journal » 2017 » November » 12
Mjournal :-War ka soo baxay Taliska Milatariga Somaliland ayaa lagu sheegay in la xiray Dhamaan Xaduudaha Somaliland ay la wadaagto Dalalka Jabuuti,Itoobiya iyo Koofurta Soomaaliya intaba Sababo la xiriira Doorashada Madaxtinimo ee Berri ka dhici doonta Doorashada Degaanada...
Mjournal :-Wararka ka imaanaya Degaanka Daarul-salaam oo hoostaga Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in Duqeyn Diyaaradeed Xalay ay ka dhacday Deegaanka Daarul-Salaam,waxaana la sheegay in Duqeynta ay Fuliyeen Illaa saddex Diyaaradood. Goobjoogeyaal ku...
Tahriibayaal la soo badbaadiyay
Mjournal :-Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen in ka badan 250 oo ay caruur ku jiraan,kuwaasi oo isku dayayay in ay ka soo talaabaan badda Mediterranean. Dadkani ayaa sida ay shaageen saraakiisha Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain waxa...
Mjournal :-Xiisadaan u dhaxeysa Ciidmada Maamulka soomaalilnd iyo kuwa Puntland ayaa Maanta ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Xiisadaan ayaa salka ku heyso arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland kadib markii Sooamaliland ay qorsheysay in qeybo ka mid ah...
Mjournal ::-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa manta shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Jubbaland. Kulankaan waxaa lagaga hadlay dar dar galinta hawlgalada amaanka iyo dagaalka ka dhanka ah...
Mjournal :-Ku dhawaad 100 dagaalame, oo Al Shabaab ayaa lagu dilay tiro kalena, dhaawac ayaa soo gaaray sida uu Sheegtay Mareykanka, kadib duqeyn ka dhacday Koonfurta Somaliland, 24-kii saac ee lasoo dhaafay. War kasoo baxay, Howlgalka Mareykanka ee Qaarada Afrika, ee AFRICOM,...
Mjournal :-Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay wax amni darro iyo cabsi ka jirin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaddib markii ay AMISOM ay joojiyeen dhaq dhaqaaqii xeyndaabka garoonka. Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka Maxamed C/llaahi Salaad...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya inta u dhexeeysa Degmooyinka bardaale iyo baydhabo ayaa sheegaya in Dagaal xoogan uu halkaasi ku dhexmaray ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kusii...